Bannaanbax wax badan ka duwan kuwii la arki jiray oo hadda Muqdisho ka socda | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Bannaanbax wax badan ka duwan kuwii la arki jiray oo hadda Muqdisho...
Bannaanbax wax badan ka duwan kuwii la arki jiray oo hadda Muqdisho ka socda
Magaalada Muqdisho ayaa maanta waxa ay martigelinaysaa bannaabax aan isaga oo kale waayadaan magaalada lagu arag, kaas oo loogu talogalay taageeridda dowladda Soomaaliya, iyo soo-bandhigista waxqabadka muddada 100-ka maalmood ee uu xilka haayay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Bannaanbaxan, oo ka socda garoonka kubbadda cagta ee Banaadir, ayaa waxaa ka qeybgalaya kummanaan dad ah oo isugu jira dad ay gawaari ku daabuuleen maamullada degmooyinka Xamar iyo dadweyne kale oo iskood u tegay.
Waddooyinka magaalada ayaa waxaa dhooban askar celinaysa gawaarida jidadka maraysa, si loo adkeeyo nabadgeliyada.
Waxaa la filayaa in madaxweyne Farmaaajo uu khudbad toos ah u jeediyo dadweynaha isugu yimid garoonka Banaadir. Taasna waxa ay noqon doontaa markii ugu horreysay ee uu madaxweynahu meel fagaare ah kala hadlo dadka.
Wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in aad loo xaddiday dhaqdhaqaaqa warbaahinta ee gudaha goobta uu bannaanbaxo ka dhacayo, waxaana la soo koobay tirada warbaahinta loo ogol yahay in ay tebiyaan bannaanbaxa.
Wariyayaal ku sugan garoonka Banaadir ayaa noo sheegay in la diiday tebin toos ah oo ay warbaahintu ku samayso dhacdooyinka halkaas ka socda. Sidoo kalena, waxaa la sameeyay guddi faafreeba sawirrada iyo muuqaallada kale ee bannaabaxa laga qaadayo.
Waa markii ugu horreysay ee ay dowladdu samayso nidaam sidaas u adag oo lagu xakamaynayo dhaqdhaqaaqa saxaafadda.